Clever Ads Slack Ukuhlanganisa ... Yakhelwe Ukonga Isikhathi!
clever ads Ngena ngemvume Slack
Ngena ngemvume Slack
Ukuhlanganiswa kwe- Slack Google Ads , izikhangiso ze-Microsoft nezikhangiso ze-Facebook
Lungiselela izexwayiso zakho ezizenzakalelayo ukuze uzithole ngengxoxo nale Slack Integration
Thola amagrafu & amamethrikhi ephathelene nokusebenza ama-akhawunti akho '
Hlela imibiko nsuku zonke noma masonto onke ukuze uthole ama-metric akho e wengxoxo
Faka ku- Slack
Izinzuzo Clever Ads Slack Integration
Ngokuhlanganiswa kwethu Slack , uzobe ugcina isikhathi esanele sokujabulela lelo khofi lasekuseni olithanda kakhulu! ☕
Ungavula ithebhu eyodwa encane, esindisa isikhathi ngokubona ama- Google Ads abaluleke kakhulu, ama-Bing Ads &amp; Facebook Ads metrics endaweni eyodwa.
Uhlela usuku lwakho ukuze imisebenzi suku kangcono
Lokhu kuhlanganiswa Slack kwenza sikwazi ukulandelela inqubekela phambili yemikhankaso ngamamethrikhi, amagrafu, kanye nezifinyezo ngqo engxoxweni Slack
Uma kuqhathaniswa namathuluzi afanayo emakethe adinga ukukhokhelwa, Clever Ads akudingeki ukuthi ukhokhe imali yokuyisebenzisa.
Hlunga ama-akhawunti we- Google Ads , Microsoft Ads kanye ne-Facebook Ads akuthanda kakhulu futhi athola amamethrikhi namagrafu wokusebenza kwawo.
Thola ukufinyelela kudeshibhodi yakho nale Slack Integration futhi wenze ngendlela oyifisayo ngendlela ofuna ukuthola ngayo amamethrikhi akho ngeSlack. Hlunga i -akhawunti yokukhangisa oyithandayo kakhulu bese uhlela imibiko yakho.
Kungani kufanele ufake i- Clever Ads Slack Integration?
Amamethrikhi abalulekile aphathelene nokusebenza Google Ads zakho ze-Google, ukusebenza kwe-Microsoft Advertising, kanye ne-Facebook Ads njengokuvela, ukuguqulwa, ukuchofoza, nokuningi kuzotholakala ngqo ku- Slack .
Cela igrafu ukubona kwemvelo yakho oyithandayo imethrikhi (okuvelayo, izindleko, ukuguqulwa, njll) ukukhangisa akhawunti yakho ekhethiwe. Njengoba isisho sibonisa, isithombe uzisole ayinkulungwane amazwi.
Thola ama-metric akho isifinyezo nsuku zonke / masonto onke kusiteshi sakho encomekayo ukuzihambisa emphakathini wethimba lakho noma uwagcine kuwe ngokukhetha ngqo umlayezo inketho.
Ngalesi Slack , ungacela amathiphu wokuthi ungazithuthukisa kanjani Google Ads zakho ze-Google noma isu le-Facebook Ads ngokusebenzisa yonke imilayezo elula. Sizokwazi ukuphakamisa izinto ezifana nokungeza uhlobo lomkhankaso oluhlukile, ukulungisa isabelomali somkhankaso, noma ukuguqula umgomo womkhankaso.
Slack kanjani ngeSlack Integration
Ngomzuzu nje, ungangeza ukuhlanganiswa Clever Ads ku-akhawunti yakho
Faka Slack Integration
Faka uhlelo lokusebenza lwe Clever Ads Slack ngokuchofoza kunkinobho ethi "Faka ku- Slack ".
Ngena ngemvume usebenzisa i-Google, i-Microsoft, kanye / noma i-Facebook Akhawunti yakho ne-akhawunti yakho yokukhangisa.
Khetha i-akhawunti yakho
Khetha i-akhawunti yakho oyifunayo bese ushintsha phakathi kwama-akhawunti eziningana yakho nganoma isiphi isikhathi.
Yenza okuhle kulokhu Slack Integration
Qala ukuthola imibiko ngokubuza i- Slack bot yakho ngezifinyezo, amagrafu, njll.
Ngabe lokhu Slack kwenza ini ncamashi?
Inhloso Slack Integration yethu ukwenza impilo yakho ibe lula futhi njengoba sithanda ukuthi "sikongele isikhathi esanele sokujabulela lelo khofi lasekuseni olithanda kakhulu." Uma Google Ads ofuna ukusebenza nayo, ungaqala ukuthola amamethrikhi namagrafu ngqo Slack noma Microsoft Teams ngokumane uthumele i-bot. Ngale ndlela, ugcina isikhathi sakho esiyigugu ngoba ngeke kudingeke ufake Google Ads njalo ngosuku.
Izaziso : uzizwe uvikeleke kakhulu ngama-akhawunti akho wokukhangisa. Clever yezikhangiso zeClever izokwazisa uma ngabe kukhona okungajwayelekile okwenzeka ku-akhawunti yakho.
I- Slack 100%!
Kungani kufanele ngixhume Google Ads zami Google Ads i-akhawunti?
Ukuze Slack kusebenze kahle, kudinga idatha kusuka ku-akhawunti yakho Google Ads Ngezinhloso zokuphepha, i-Google ayivumeli noma ngubani ukuthi abone amamethrikhi akho ngokuzenzakalela, ngakho-ke sidinga imvume yakho. Sidinga ileveli ephansi yokufinyelela ku- Google Ads ebizwa ngokuthi "Phatha Adwords ." Lolu kuphela uhlobo lwemvume esiludinga ukusivumela kuphela ukuthi sihlole amamethrikhi wakho futhi sikhiqize amashadi nezifinyezo.
Kuphephile yini ukuxhumanisa Google Ads zami Google Ads i-akhawunti?
Kuphephile ngo-100%! Clever Ads we-Google Partner. Ukuze sizuze lesi sihloko, kufanele sihlangabezane namazinga aphezulu we-Google kanye nemibandela. Imikhiqizo eyahlukene esiyenze eminyakeni edlule isungule idumela eliqinile phakathi kwamabhizinisi ayi-150,000.
Uma usungene ngemvume ku-akhawunti yakho yakwa-Google, sigcina ithokheni lokufinyelela kusizindalwazi sethu esibethelwe. Ukhiye usetshenziswa kuphela yi- Clever PPC API yethu futhi awabiwa neze ne- Slack noma ne- Microsoft Teams . Lapho sithola idatha efanelekile Google Ads , siyiguqula ibe Slack noma we- Microsoft Teams , futhi siwuthumela engxoxweni efanayo obhale kuyo umyalo.
Yonke imiyalezo kungaba ngeyangaphakathi noma nge-Google, i- Slack , noma Microsoft Teams ibethelwe kusetshenziswa i-TLS 1.2 (Security Layer Security). Sifinyelela kuphela amasayithi ngephrothokholi ye-HTTPS. Kusukela ekugcineni kwethu, singafinyelela kuphela Google Ads ngoba usinike imvume yokwenza kanjalo. Ngaphansi kwanoma yisiphi isimo sivunyelwe ukuthola idatha ngaphandle kwamapharamitha ashiwo.
Okuningi Clever Ads ' Slack Integration
Funda kabanzi mayelana Slack Integration engakusiza wenze imibiko isebenze futhi ikusize wonge isikhathi.
Okunikezwa yizikhangiso Clever Ads
Clever Ads ' Slack Integration okwamanje inikeza uchungechunge lwezici ezibaluleke kakhulu ezenzelwe ukunikeza abasebenzisi bethu ukusetshenziswa okukhulu nokukhiqiza. Zonke izici zenzelwe ukususelwa empendulweni yomsebenzisi nokusetshenziswa kwakhe ukuze kufaneleke ngangokunokwenzeka.
Uma abasebenzisi ukufaka uhlelo lokusebenza, bathola ukufinyelela siqu kakhulu kudeshibhodi yabo siqu lapho bangakwazi ukulungisa Bot, schedule imibiko futhi ulungiselele izaziso. Abasebenzisi futhi umeme amalungu ethimba ngaphezulu ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ukujabulela izici ukuhlanganiswa sika.
Clever Ads ' Slack Integration iyithuluzi elihle lamaqembu wokumaketha aphatha imikhankaso yawo yokukhangisa yebhizinisi, kepha futhi nezinhlangano zokukhangisa eziphatha imikhankaso yezinye izinkampani.
Ungasebenzisa izici zezexwayiso ukuze uhlale uphephile futhi uqiniseke ukuthi ngeke uphuthelwe lutho. Ungahlela izexwayiso eziningi njengoba ufisa, ngokukhetha i-akhawunti yakho yokukhangisa oyithandayo bese usebenzisa imethrikhi oyithandayo ofuna ukuyilandela. Uma udinga usizo olwengeziwe ekumiseni izexwayiso zakho, unganqikazi ukusithumela i-imeyili ku-support@cleverads.com "> assistant@cleverads.com
Ungathola njalo abanye oluvela Sezaziso esethiwe ukuthi sidale ngawe futhi uzothola zitholakale uma ukufinyelela kudeshibhodi yakho.
IN-APP Kuhle imikhuba
Ingxoxo ye-Slack inikeza izinqamuleli zabasebenzisi ukuze bafinyelele ngokushesha futhi kalula imisebenzi yohlelo lwabo lokusebenza. Ungathola lezi zinqamuleli ngaphansi kophawu olungu- ⚡. Ngokuchofoza kuyo, skrolela uze uthole izinqamuleli Clever Ads bot. Ungabuza masinyane amamethrikhi, amagrafu, ukuqhathanisa kwanyanga zonke, noma amathiphu wokuthi ungawasebenzisa kanjani amasu akho Google Ads Facebook.
Futhi ungamane Slack -Slack bot ukuze ucele izenzo ofuna ukuthi zenziwe. Nawa wonke amagama ongawathayipha futhi i-bot izophendula ngedatha:
Imenyu: I bot kuzovula bar imenyu ngawe ukuze ukwazi ukusebenzisa isenzo ofuna ukwenza.
Amamethrikhi: Ibhodi Clever Ads izokukhombisa isifinyezo semethrikhi yakho oyikhethile.
Ukuchofoza: Lo mbhalo uzobonisa igrafu yokuvela kokuchofozwa ezinsukwini eziyi-7 ezedlule. Thola imiphumela efanayo ye- Impressions, Conversions, Cost, CTR, CPC. Ithiphu: Ikukhombisa ithiphu Google Ads kanye / noma ama-akhawunti wezikhangiso ze-Facebook.
Imibiko: Ibonisa uhlu imibiko osinqumile.
Qiniseka ukuthi umema i- Clever Ads Slack bot eziteshini zakho ozithandayo ngokuthayipha / mema @CleverAds. Ngokwenza njalo, uzokwazi ukucela i-bot ukuthi ikuthumele amamethrikhi, imibiko, namagrafu kuleso siteshi esithile. Uzokwazi ukuhlela imibiko yakho ozoyithola kulezo ziteshi lapho kumenywe khona i-bot. Khumbula ukuthi uma i-bot ingamenyiwe esiteshini, lapho-ke ngeke ukwazi ukubona isiteshi njengenketho okufanele ikhethwe lapho ulungiselela imibiko yakho nezexwayiso kudeshibhodi.
Lesi yisici esihle sokukwazi ukuxoxa ngemikhankaso yakho ye-PPC nalo lonke iqembu lakho. Uma usebenzela imikhankaso yamakhasimende akho, uzokwazi ukubamemela Slack bese wabelana ngokuvela kwemiphumela nemikhankaso oyisebenzele.